‘क्रसरमा प्रशोधन उद्योगमा मेरो लगानी छैन’ – Dainik Lumbini
‘क्रसरमा प्रशोधन उद्योगमा मेरो लगानी छैन’
नवलपुरका १४ वटा बालुवा प्रशोद्धन उद्योग अवैध भनेर शील गरियो तर पछि कुनै कानूनी कारबाही पनि नगरी ति उद्योगहरू पालिकाको निर्णयको आधारमा खोलियो । शिल भएका १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये १२ वटा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा थियो । आखिर कसरी खोलियो त यहाँ बालुवा प्रशोधन उद्योग ? विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीसंग लुम्बिनी संवाददाता रामकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ः
अवैध भनेर शील गरिएका बालुवा प्रशोधन उद्योग खोलिएछ ? कसरी खोल्नुभयो ?
जिल्ला समन्वय समितिमा पनि जिल्लास्तरको बैठक बसियो । प्रक्रिया नपुगेको, आईई गर्न बाँकी रहेको सारा कुराहरू भेटियो । त्यसरी भेटिएपछि ति उद्योगहरूलाई कमसेकम एक पटक दर्ता प्रक्रियालाई मौका दिने र त्यो अवधि भर शिल खोलेर काम गर्न दिने भनेर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार खोलिएको हो ।
हामीले निर्णय पनि हे¥यौं र समन्वय समितिको प्रमुखसँग पनि कुरा ग¥यौं । पालिकालाई नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको मात्र हो तर स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरूपयोग ग¥यो भन्ने समन्वय समितिको प्रमुखको भनाइ छ । अनि कसरी समन्वय समितिको निर्णयमा टेकेको हुन्छ र ?
खै उहाँले त्यो कसरी भन्नुभयो थाहा भएन म पनि त्यो बैठकमा बसेको हो । उहाँहरू (बालुवा प्रशोधन उद्योगी) ले कसैले घरेलुमा, कसैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत विभिन्न कार्यालयहरूमा उद्योग दर्ता गर्नु भएको छ । इआईईको प्रक्रिया सबै नपुगेको हुनाले शील भएको हो । उहाँहरूको हामीले व्यवसायी कर पनि दर्ता गरेका छौं । व्यवसायी कर दर्ता गरेपछि उहाँहरूसँग पालिकाले कर लिई सक्यो । उहाँहरूसँग पालिकाले कर लिई सकेपछि उहाँहरूलाई एक पटकलाई मौका दिने भनेर त्यो वातावरण बनाएर हामीले खोलिदिएका हौं ।
दर्ता प्रक्रियाकै कुरा गर्दा एक वर्षको समय मौकाको रूपमा दिइएको छ । त्यो अलि लामो समय भएन र ?
देशको स्थिति यस्तै छ । कोरोना छ । यस्तो बेलामा भन्ने वित्तिकै सबै कुरा तुरून्त हुँदैन । यो महामारीको परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर गरेर अलिकति समय लामो दिइएको हो ।
ति बालुवा प्रशोधन उद्योगीहरू दर्ता प्रक्रियामा आएको छ कि छैन ? कि एक वर्ष यत्तिकै बित्ने अनि फेरि म्याद थप गर्र्दै जाने पो हो कि ?
उहाँहरू लाग्नु भएको होला । उहाँहरूले एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु भएन भने फेरि शील गर्छौं ।
शील गर्दै खोल्दै जाने त होला नि ? कारबाही हुने होइन होला ?
होइन अब यस्तो हुन्न । १ वर्षभित्र पनि प्रक्रिया पूरा नभए कारबाही गर्छौं । तर, के हो भने प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरूले अब जसरी पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
हजुरको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष बाँकी छ । डेढ वर्षसम्म म्याद थप्दै जाने आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि जे सुकै गरोस् भन्नेमा हजुर हुनुहुन्छ रे ?
भन्नेले जे पनि भन्छन् । त्यो त राजनीतिक प्रतिशोध साध्नेले लगाएको आरोप होला । म मेरो कार्यकाल सकिएपछि पुनः अध्यक्षमा आउन पनि सक्छु । त्यो छुट्टै कुरा हो । मेरो मतदाता र मेरो जनताले यो ठाउँमा मलाई फेरि पनि पठाउन सक्छ, त्यसैले मैले मेरो कार्यकाल मात्रै हेर्ने कुरा हुन्न । अथवा भोली अर्कै आउला । उसलाई पनि समस्या होला यो विषयमा उसले पनि काम गर्नु पर्ला त्यसैले मैले यसलाई जस्ताको तस्तै छाडेर जाने कुरा हुन्न । मैले हल गरेरै छाड्छु । कार्यकाल नसक्दासम्म मैले म्याद थप्दै जान्छु र यसलाई त्यसै छाड्छ भन्ने कुरा चाँही अनर्गल प्रचार हो ।
स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेर रीत पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको भनेर बन्द गरिएको बालुवा प्रशोधन उद्योग खोलियो भनेर जुन आरोप तपार्इंहरू माथि आएको छ नि त्यो चाहीँ के हो त ?
बन्द गर्ने निकाय भनेको कुन हो ? हामीले नै बन्द ग¥यौं हामीले नै खोल्यौं । अरूले आएर शिल गरिदिएको त होइन । शील गर्न प्रशासनको सहयोग लिइयो होला त्यो फरक कुरा हो । उद्योग बन्द गर्नु भनेर हामीले नै पत्र दिएका छौं । हामीले शील गरेका उद्योग हामीले नै खोल्यौं । बन्द गर्ने परिपत्र गर्नेदेखि सारा कुरा त पालिकाले गरेको हो । अनि अधिकारको कसरी दुरूपयोग भयो ? अरू कुरासँग त हाम्रो सरोकार नै भएन नि ।
क्रसर उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने पनि क्रसर उद्योगहरू मापदण्डअनुसार छैनन् । बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । के यिनीहरूलाई अब मापदण्डको दायरामा ल्याइन्छ त ?
यही कुरा मुख्य हो । राज्यले पनि दोधारे कुरा गरेको छ । यो समस्या देशभरिको हो । क्रसर र वासिङ्ग उद्योग सबैमा यो समस्या छ । यसलाई राज्यले एउटा नियन्त्रणमा ल्याएर काम गर्दै गयो भने हामीलाई पनि समस्या हुन्छ तर हामीले यही कुराले गर्दा एक पटक पनि मौका दिएन भने अन्याय हुन्छ भनेर मौका दिएका हौं ।
अध्यक्षज्यूको पनि ट््याक्टर छ । अनि जनप्रतिनिधिहरूको पनि बालुवा प्रशोधन उद्योगमा लगानी छ कि क्या हो त्यही भएर अध्यक्षज्यू शील गरिएका उद्योग खोल्न आत्तिनु भयो भन्ने पनि आउँछ नि ?
मेरो ट््याक्टर छ तर, खोलामा गएको छैन, होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा बाटोमा पानी हाल्नका लागि ठेक्का दिइएको छ नपत्याए बुझ्दा पनि हुन्छ । मैले कागजै गरेर सहमति गरेको छु । क्रसरमा प्रशोधन उद्योगमा मेरो कही कतै लगानी छैन । सबैले बुझ्दा पनि हुन्छ ।
व्यवयासीहरूको दबाब वा आर्थिक प्रलोभन त जोडिएको छैन ?
होइन त्यस्तो छैन । उहाँहरूको केही दबाब आएको छैन । आर्थिक प्रलोभनका कुरा पनि होइन् । बरू उहाँहरूलाई हामीले अनुगमन गरियो । प्रशासन समेत राखेर अनुगमन गरियो । अनगमनका बेलामा कतिपय अवैध भेटिए पनि कतिपय अवैध भेटिए । अवैध भेटिएकालाई प्रक्रियामा जानु भनिएको मात्र हो हामीले ।
अध्यक्ष, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका
विपन्न समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन लागिपर्छौं
सुशासन र सेवा प्रवाहमा नमूना काम गरेका छौं
ओलीविरुद्धको यो घेराबन्दी अहिले एकाएक आएको होइन - रिमाल